Taxanaha Apple Watch 7: ka weyn, ka xoog badan, isku mid ah | Wararka IPhone
Taxanaha Apple Watch 7: ka weyn, ka adag, isku mid ah
Luis Padilla | 18/10/2021 11:53 | La cusbooneysiiyay 18/10/2021 11:55 | Apple Watch, dhowr
Waxaan tijaabinay taxanaha Apple Watch 7, gaar ahaan qaabka birta ee midabka garaafyada leh isku xirnaanta LTE. Shaashadda ka weyn iyo xawliga degdegga ah… ma u qalantaa isbeddelka? Waxay ku xiran tahay waxaad gacantaada ku haysato.
Wararka xanta ah ee ku saabsan Apple Watch ee mustaqbalka waxay ka bilaabmayaan marka moodalka cusub la bilaabo, muddo sannad ahna waxaa jira waqti loogu talagalay dhalanteedyo badan oo aakhirka isu beddela niyad -jab. Sannadkan waxaan fileynay isbeddel xagga naqshadeynta ah, oo ay ku jiraan dareemayaal cusub si loo cabbiro heerkulka iyo heerarka gulukooska dhiigga, xitaa cadaadiska dhiigga waxaa xakameyn doona Apple Watch. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Apple Watch uu gaaray heer aad u sarreeya oo qaan -gaadhnimo ah in isbeddellada ay durba la imaanayaan dhibic, oo sannadkan xaqiijinaya.
1 Cabbirro cusub, naqshad isku mid ah
2 Adkaysi badan
3 Lacag degdeg ah
4 Midabo cusub laakiin midabyo maqan
5 Inta kale isma bedesho
6 Shaashadda ayaa dhammaan qiil ka dhigaysa
Cabbirro cusub, naqshad isku mid ah
Cusboonaysiinta ugu weyn ee cusub ee Apple Watch waa cabbirkeeda weyn ee labada moodelba. Iyada oo koror yar uu ku yimid cabbirka guud, Apple waxay awood u yeelatay inay kordhiso cabbirka bandhigyada labada moodelba, taasoo hoos u dhigaysa garka illaa heer ay bandhigyadu gaaraan geeska qalooca ee muraayadda waxaa si gaar ah loo dareemi karaa markaan aragno sawirrada shaashadda oo buuxa ama aan adeegsanno goobahooda cusub, oo u gaar ah Taxanaha 7. Shaashadu waxay 20% ka weyn tahay Taxanaha 6, in kasta oo markii hore ay u muuqatay in isbeddelku ku dhowaad dayacnaan lahaa, nolosha dhabta ah waxay umuuqataa inay ka sii weyn tahay.
Adeegso barnaamijyada sida Calculator, garaacyada Contour iyo Modular Duo (mid gaar ah), ama xitaa kiiboodhka cusub ee buuxa (oo waliba gaar ah) ayaa iftiiminaya cabbirkan shaashadda weyn. Waxay muujineysaa wax badan ... in kasta oo aysan jirin wax qiil ah sababta aysan sidoo kale loogu heli karin moodooyinkii hore, maxaa yeelay haddii taxanaha 7 ee 41mm ay yeelan karaan, Taxanaha 6 ee 44mm sidoo kale wuu yeelan karaa. Waa ceeb go'aamada noocaan ah, maxaa yeelay Apple Watch (Taxanaha 6) oo sano jir ah ayaa durba ka sii dhammaanaya qaar ka mid ah software-ka cusub, taasina ma sameyso aaladda wax wanaag ah.
Dib -u -cabbirka ka sokow, shaashaddu way dhalaalaysaa (illaa 70%) marka ay bilaa camal tahay, inta aad haysato ikhtiyaarka “Screen always on” ee la hawlgeliyay. Haddii aadan waligaa isku dayin ikhtiyaarkan Apple Watch, hubaal ma qiimeyn doontid, laakiin marka aad haysato waxaad ogaataa in ay tahay mid wax ku ool ah Sababtoo ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad hubiso waqtiga intaad qoreyso maqaal kan oo kale ah, adigoon gacantaada ka qaadin furaha oo aad gacantaada ka rogto. Isbeddelkan iftiinka wuxuu hagaajiyaa shaqadan wuxuuna sidaas sameeyaa (aragti ahaan) isagoo aan saameyn ku yeelan madaxbannaanida saacadda, waa wax cajiib ah.
Waxaan sii wadnaa inaan ka hadalno shaashadda saacadda, oo ka mid ah qeybaheeda ugu jilicsan. Apple waxay hubisaa taas muraayadda hore ee Apple Watch waxay u adkaysi badan tahay naxdinta, iyada oo ay ugu wacan tahay naqshad cusub oo salka fidsan leh, marka lagu daro xaqiijinta saacadda sida IP6X boorka u adkaysta, taas oo siinaysa ilaalin dhammaystiran. Apple waligeed ma xaqiijin saacaddiisa inay leedahay iska caabin boodh, sidaa darteed ma naqaanno farqiga u dhexeeya jiilalkii hore. Marka laga hadlayo iska -caabbinta biyaha, waxaan sii wadnaa inaan qotodheerno 50 mitir, ma jirin wax isbeddel ah oo dhinacan ah.
Apple Watch wali waxay leedahay daaqado hore oo kala duwan iyadoo ku xiran hadday yihiin nooc Sport ama mid bir ah. Xaaladda moodada Ciyaaraha, waxay leedahay galaas IonX ah oo aad ugu adkaysan kara naxdinta, u adkaysi yar xagashada, halka qaabka birta ah crystal ka samaysan yahay safayr, si weyn u adkaysi u xagashada, laakiin aan u adkaysan naxdinta. Khibradayda, waxaan aad uga walaacsanahay xoqitaanka dhalada marka loo eego kuuskuusyada, waana mid ka mid ah sababihii aan mar labaad u doortay moodalka birta ka dib hal sano oo aan la qaatay Taxanaha Aluminium 6.
Lacag degdeg ah
Ku -dallacsiinta degdegga ahi waxay ahayd dhinacyo kale oo ay diiradda saareen diiradda cusub ee Apple Watch Series 7. Waxaan jeclaan lahayn in badan in la kordhiyo madax -bannaanida illaa aan ka gaarnayno laba maalmood annaga oo aan dib u buuxin, laakiin waa inaan dejinnaa waxay qaadataa waqti yar si loo buuxiyo. Wax ayaa ka fiican wax kasta. Tani waxay kuu sahli doontaa inaad awooddo inaad gashato habeenkii si aad ula socoto hurdadayada subaxdana waxay u adeegtaa sidii saacad digniin.. Sida laga soo xigtay Apple, waxaan ku buuxin karnaa Taxanaheena 7 illaa 30% si ka dhakhso badan taxanaha 6, min eber ilaa 80% 45 daqiiqo gudahood, iyo 8 daqiiqo oo dib -u -buuxin ah (inta aan ilkaha cadayno) waxay bixiyaan habeen dhan oo ah kormeer hurdo.
Tan iyo markii Apple uu ku bilaabay howshaan hurdada ee cusub ee Apple Watch, waxaan caadaystay inaan dib u soo ceshado maalintii laba jeer: markaan guriga imaado intaan diyaarinayo cashada iyo ilaa intaan seexanayo, iyo subaxdii intaan qubaysanayo. Lacagtan cusub ee degdegga ah waxaan awoodi doonaa inaan saacadda gacanta ku dhejiyo curcurkayga habeen hore, anigoo aan sugin inaan seexdo ... inta aan xasuusto, taas oo dhici doonta marar dhif ah. Waxaa laga yaabaa in waqtiga la dhaafo qarashkan degdega ahi wuxuu noqon doonaa mid waxtar leh runtii, laakiin waqtigan uma malaynayo inay noqon doonto isbeddel weyn caadooyinka aqlabiyadda.
Si aad u isticmaasho lacag degdeg ah, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo fiilo xeedho cusub oo leh isku xira USB-C oo ku jira sanduuqa Apple Watch, iyo xeedho waa inay lahaataa awood wax -ku -dallac ah oo ah 18W ama la jaanqaadi Keenista Awoodda taas oo 5W ku filnaan lahayd. Heerka 20W Apple charger -ka ayaa ku habboon tan, ama xeedho kasta oo kale oo ka yimid soo -saare lagu kalsoonaan karo oo aan ka heli karno Amazon qiimo jaban (sidan oo kale). Jid ahaan, saldhigga MagSafe ee Apple oo qiimihiisu yahay 149 XNUMX kuma habboona ku dallacsiinta degdegga ah, faahfaahin weyn.
Midabo cusub laakiin midabyo maqan
Sannadkan Apple waxay go’aansatay inay si weyn u beddesho gamutka midabkiisa ee Apple Watch, waxayna ku samaysay go’aan aan qof walba jeclayn. Marka laga hadlayo aluminium Apple Watch Sport, Hadda ma haysanno lacag ama cirro meel bannaan, maxaa yeelay Apple waxay ku dartay xiddig cad (oo ah dahab-cad) iyo saqbadh (buluug-madow) si ay u beddesho. Waxay haysaa casaanka iyo buluugga, sidoo kale waxay ku darsataa qaab millatari cagaar madow oo aad loo jecel yahay. Haddii aan dooran lahaa aluminium sannadkan waxaan u malaynayaa inaan la joogi lahaa saqda dhexe, laakiin midabada midkoodna dhab ahaantii iima qancin.
Waxaa laga yaabaa inay taasi igu kaliftay inaan aado moodalka birta, oo durba madaxayga dhib ku hayay tan iyo ka hor intaanan garanayn midabada ugu dambaysa. Birta waxaa laga heli karaa lacag, dahab iyo garaaf (sababta oo ah meel bannaan oo madow waxay ku kooban tahay daabacaadda Hermes oo aan la gaari karin inta badan). Birtu had iyo jeer waxay abuurtaa shaki badan kuwa ka fikiraya sababta oo ah sida ay u adkaysan doonto marinka waqtiga, laakiin aad bay uga sii fiican tahay aluminium. Aniguna waxaan sidaa u leeyahay ka dib markii aan haystay laba Apple Watch oo bir ah iyo laba aluminium ah.
Ugu dambayntii, waxaan haysannaa ikhtiyaarka Apple Watch ee titanium, oo leh meel bannaan oo madow iyo midab titanium ah oo aan i qancin, waana sababta aan u doortay birta, taas oo waliba ka jaban.
Inta kale isma bedesho
Ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimid Apple Watch -ka cusub. Cabbirka shaashadda ka weyn oo leh dhalaal badan oo shaqo la’aan ah, iska caabin badan oo galaaska hore ah iyo lacag degdeg ah oo aanan u arkin isticmaalka aad u badan xilligan. Xitaa kamaanan hadlin awood weyn ama xawaare markaan hawlo fulinayno, maxaa yeelay ma jiro. Processor -ka oo ay ku jiraan Taxanahan cusub ee 7 wuxuu ficil ahaan la mid yahay Taxanaha 6, taas oo dhinaca kale si fiican u shaqaysa xitaa nidaamka ugu dambeeya ee hawlgalka, watchOS 8, laakiin waa isku mid. Qaar naga mid ah ayaa filayay in xoogaa tallaabo ah loo qaado madaxbannaanida iPhone, laakiin midna.
Sidoo kale ma jiraan isbadalo dareeme, wax astaamo caafimaad ah, kormeer hurdo, iyo astaamo dhab ah oo cusub, maadaama aysan jirin. Haddii aan dhinac iska dhigno garaacyada cusub, ma jiro sifo gaar ah ee Taxanaha 7, laakiin ma aha inay ku jiraan kuwa kale, laakiin maxaa yeelay runtii ma jiraan wax cusub. Apple Watch waa badeecad aad u wareegsan, labadaba naqshadeynta iyo shaqadeeda la socodka caafimaadka iyo isboortiga. Cabbiraadda garaaca wadnaha, ogaanshaha garaaca aan caadiga ahayn, cabbirka buuxinta oksijiinta iyo waxqabadka EKG ayaa baarka aad u sarreeya, aad u sarreeya oo xitaa Apple ma awoodin inay garaacdo sannadkan, isagoo jooga meeshii uu joogay. Waxaad ka iibsan kartaa € 429 (aluminium) Apple iyo Amazon (isku xirka)
Shaashadda ayaa dhammaan qiil ka dhigaysa
Apple waxay biloowday smartwatch cusub oo ay wax walba sharad ugu dhigeen shaashadda cajiibka ah, quruxda badan iyo dhalaalka leh. Runtii waa wax cajiib ah isla marka aad ka soo saarto sanduuqa oo aad daarto saacadda markii ugu horreysay. Isbeddelka cabbirka iyo kororka aagga shaashadda ku dhawaad ​​ilaa geeska ayaa ka dhiga inay u ekaadaan saacad aad uga weyn tii hore, in kasta oo ay si dhib yar u kordhineyso cabbirka. Laakiin taasi waa intaas, wax cusub lagama sheegi karo Taxanahan 7, ugu yaraan ma ahan wax cusub oo runtii quseeya.
Apple Watch waa smartwatch -ka ugu fiican ee suuqa, oo ka fog kan labaad, iyo xitaa fasaxa sannadkan ma aha inuu masaafadan soo gaabiyo. Go'aanka iibsashada Taxanaha Apple Watch 7 waa in la sameeyaa iyadoo la fiirinayo waxaad hadda ku xiran tahay curcurkaaga. Ma waxay noqon doontaa Apple Watch -kii ugu horreeyay? Markaa waxaad helaysaa smartwatch -ka ugu fiican oo aad hadda iibsan karto. Miyaad hore u haysatay Apple Watch? Haddii aad go'aansatay inaad beddesho, horay u soco. Laakiin Haddii aad shaki qabtid, Taxanahan cusub ee 7 ma ku siin doono sababo badan oo aad ku nadiifin karto.
Ku dhejiyay: 18 2021 Oktoobar
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 18 2021 Oktoobar
Bandhig Cajiib ah
Iska caabin weyn
Isla processor -ka
Dareemayaal isku mid ah
Shaqooyin isku mid ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Taxanaha Apple Watch 7: ka weyn, ka adag, isku mid ah
samee 1 bishii
8 daqiiqo si aan u cadayano ilkahaaga…. Waxaan sameynayaa wax qaldan X)
Dukaamada internetka ayaa xiran! Dhacdada Mac waa dhowdahay
Apple waxay sii wadaysaa inay ka noqoto barnaamijyadeeda codsi ka yimid dawladda Shiinaha